ဝါးခယ်မ : ၀ါးခယ်မ သခင်သိန်းဖေ ပညာသင်ဆု
၀ါးခယ်မ သခင်သိန်းဖေ ပညာသင်ဆု
လောက၀ယ် ပညာမည်မျှအရေးကြီးကြောင်း အထူးပြောနေဖို.ပင် မလို ။
သံသရာအတွက် လောကုတ္တရာ ဆိုင်ရာ သိမှတ် လေ.လာ ကျင်.ကြံ အားထုတ်ရန်များ ၊
လောကီဆိုင်ရာ ဘ၀တိုးတက်ရေး အတွက် အတတ်ပညာ / အတန်းပညာများ စသည်တို.က မည်သို.၀ိဝါဒကွဲပြားနေသည်ဖြစ်ပါစေ လိုအပ်နေမြဲဖြစ်သည် ။
ထို.အတွက်လည်းဆင်ခြင်တုံတရား ပြည်.၀သော မိဘများက မိမိတို.သားသမီးများ ပညာတတ်များဖြစ်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းပေးနေကြသကဲ့သို. ဘ၀နောင်ရေး အရှည်မျှော်တွေးတတ်ကြသော ကျောင်းသား/လူငယ်များကလည်း ပညာတတ်များဖြစ်ဖို.အရေး ကြိုးပမ်း အားထုတ်နေကြသည် ပဲဖြစ်သည် ။
သို.ရာတွင် ဖြစ်တတ်သည်.လောက၏ သဘောအတိုင်း ထူးချွန်သော ကျောင်းသား/သူအချို.အတွက် စိတ်အေးစွာပညာဆက်လက် သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် အထောက်အပံ. ကောင်းကား ( အချို.သောကျောင်းသားတို.အတွက် ) မဖြစ်မနေ လိုအပ် နေတတ်ကြသည် ။
၀ါးခယ်မမြို.နယ် အသင်း ( ရန်ကုန် ) သည် ရန်ကုန်ရောက် ၀ါးခယ်မမြို.သားများမှ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အသင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ပညာ / ကျန်းမာ / သာယာ ဟူ၍ ဖြစ်သည် ။ ထို လုပ်ငန်းစဉ်များအနက် ပညာကိစ္စရပ်များအနက် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်သော ပညာသင်ထောက်ပံ.ကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ယခင်က အသင်းအမှုဆောင်များ နှင်. အမှုဆောင်များ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ တစ်ဦးချင်းစီ မှသာ တာဝန်ယူထောက်ပံ.ပေးနေခဲ့ကြသည် ။
၁၉၈၀ ပြည်.တွင်မူ အသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုတိုင် ဂုဏ်ထူးဆောင် နာယကကြီးဖြစ်သော သခင်သိန်းဖေ ( ၀ါးခယ်မ ) မှ နိုင်ငံ. ဂုဏ်ရည် ပထမဆင်.အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင်.ငွေ ၃၀၀၀၀ ကို ကိုယ်တိုင်၂၀၀၀၀ ထပ်မံ ထည်.၀င်ကာ ပညာရေး ပဒေသာပင်စိုက်ထူပြီး ပညာသင်ထောက်ပံ.ကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကို တစ်ဦးချင်းစီ လုပ်ဆောင်သောပုံစံမှ အသင်း မှ လုပ်ဆောင်သော ပုံစံသို.ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည် ။
၁၉၈၀ ပြည်.နှစ်မှစ၍ ပညာသင်ထောက်ပံ.မှု ပုံစံပြောင်းခဲ့သော်လည်း ပိုမိုပြည်.စုံသော စနစ်ဖြစ်စေရန်၂၀၁၀ ပြည်.နှစ် ဗိုလ်မှုးကြီး အံ.ကျော် ( ငြိမ်း ) အသင်းဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူချိန်မှစ၍ အရှိန်အဟုန်မြှင်. လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည် ။ ထိုသို.လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယကဗိုလ်မှုးကြီးအံ.ကျော် ( ငြိမ်း ) - ဒေါက်တာဒေါ်စမ်းနွဲ. နှင်. ဦးသန်းဇော်ထွန်း - ဒေါ်မျိုးမျိုး ၊ ဦးမျိုးသန်း - ဒေါက်တာနန်းဦးခိုင် တို.မှ ၅၅၅၀၀၀၀၀ ကျပ်- ၅၅၅ သိန်း စတင်မတည်ပြီးနောက် ဆရာမကြီး ဒေါ်ပိုက်မိအားရည်စူး၍ ညီ/အကို /မောင်/နှစ်မ/တူ/တူမများမှ ၄၀ ,၀၀၀၀၀ ကျပ် ၊ ဒေါက်တာဇော်ထွန်း - ဒေါ်ဌေးဌေးကြည် မိသားစု ( SSC & Pinlone Group ) ၂၄ ,၀၀၀၀၀ ကျပ် ၊ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်ကြည်ဝင်း အားရည်စူး၍ ဦးကျော်မိုးလွင် - ဒေါ်မဉ္စူဦး မိသားစု မှ ၂၀ ,၀၀၀၀၀ ကျပ် ၊ ဦးကျော်ဝင်း - ဒေါ်ညိုလေးကြည် မိသားစု မှ ၁၀ ,၀၀၀၀၀ ကျပ် ၊ ဦးသိန်းထွန်း ( ဥက္ကဋ္ဌ - ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဘဏ် ) မှ ၁၀ ,၀၀၀၀၀ အပါအ၀င် အလှုရှင်အသီးသီး မှ လှုဒါန်းခဲ့ကြပါသည် ။
ထို.အပြင် ဤကဲ့သို. ပညာရေးထောက်ပံ.မှု အစီအစဉ်အတွက် လှုဒါန်းငွေ ကို ၁၉၈၀ပြည်.နှစ်က စတင်မတည်လှုဒါန်းပေးခဲ့သော ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယက ကြီး သခင်သိန်းဖေ ( ၀ါးခယ်မ ) က ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၅၀၀ , ၀၀၀၀၀ -သိန်း၅၀၀တိတိ ကိုထပ်မံလှုဒါန်းပေးခဲ့ပြန်ပါသည် ။ ထိုသို. ပညာပါရမီဖြည်.ဆည်းလိုသူစေတနာရှင်များ ၏ လှုဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း သိန်း ၁၆၀၀ ကျော်ကို အရင်းတည်၍ ရရှိလာသော အတိုးအညွန်.ငွေများကို အသုံးပြု ထောက်ပံ.ချီးမြှင်.ပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
ထိုပညာသင်ထောက်ပံ.ခြင်းကို ယခင်က ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ပညာသင်ထောက်ပံ.ကြေး အစီအစဉ် ( မြို.နယ်အသင်း ပညာသင်ဆု ) ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း ယခုပညာသင်ထောက်ပံ.ကြေး အစီအစဉ်ကို စတင်မတည်ပေးခဲ့သူ ၊ ယခုတိုင်လည်း လှုဒါန်းပေးခဲ့သူ ၊ မြို.အတွက်လည်း မြို.နယ်ဂုဏ်မြှင်.တင်ပေးနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သော သခင်သိန်းဖေ ( ၀ါးခယ်မ ) အား ဂုဏ်ပြုသော အနေဖြင်. သခင်သိန်းဖေ ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း - ပညာသင်ဆု ဟူ၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစကာ ပြောင်းလဲသုံးစွဲခဲ့ပါသည်
ပညာရေးဆုချီးမြှင်.မှု အစီအစဉ်အနေဖြင်.၂၀၁၀ မှစကာနှစ်အလိုက် ထောက်ပံ. မှုများ မှာ -
၂၀၁၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ပညာသင်ဆု ရှင် ၇ ဦး အတွက် တစ်နှစ်စာ ပညာသင်ထောက်ပံ.ခဲ့ငွေ ၃၃, ၀၀၀၀၀ ကျပ်
၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်တွင် ပညာသင်ဆု ရှင် စုစုပေါင်း ၁၅ ဦး အတွက် တစ်နှစ်စာ ပညာသင်ထောက်ပံ.ခဲ့ငွေ ၉၉ ,၀၀၀၀၀ ကျပ်
၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်တွင် ပညာသင်ဆု ရှင် စုစုပေါင်း ၂၂ ဦး အတွက် တစ်နှစ်စာ ပညာသင်ထောက်ပံ.ခဲ့ငွေ ၁၃၆ ,၁၀၀၀၀ ကျပ်
၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် ပညာသင်ဆု ရှင် စုစုပေါင်း ၄၂ ဦး အတွက် တစ်နှစ်စာ ပညာသင်ထောက်ပံ.ခဲ့ငွေ ၁၈၁ ,၇၀၀၀၀ ကျပ်
၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်တွင် ပညာသင်ဆု ရှင် စုစုပေါင်း ၅၈ ဦး အတွက် တစ်နှစ်စာ ပညာသင်ထောက်ပံ.ခဲ့ငွေ ၁၃၆ ,၁၀၀၀၀ ကျပ် ထောက်ပံ.ချီးမြှင်. ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ယခု ၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်အတွက်လည်း ကျောင်းသား/သူ ၁၇ ဦးအား ပညာသင်ထောက်ပံ.ကြေး ချီးမြှင်.ရန်ထပ်မံရွေးချယ်ခဲ့ပြီး စတင်ထောက်ပံ.နေပြီ ဖြစ်ပါသည် ။ ထို ၁၇ ဦးမှာ မအူပင် / မှော်ဘီိ / လှိုင်သာယာ နည်းပညာတက္ကသိုလ် တို.တွင်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား ၁၄ ဦး နှင်. ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်နေသောကျောင်းသူ ၃ ဦး ဖြစ်ပါသည် ။ ထို.ကြောင်. ယခု ၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်တွင် ပညာသင်ဆုရှင်ပေါင်း ၅၅ ဦး ရှိနေပါသည် ။
၂၀၁၀ မှစ၍ ပညာသင်ထောက်ပံ.ကြေး ရယူခဲ့သည်.ကျောင်းသား/သူများအနက် ကျောင်းသား/သူ ၂၀ ဦးမှာ ဘွဲ.ရခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် ။
ပညာသင်ဆုရွေးချယ်ရေးအတွက်ကိုမူ ၀ါးခယ်မမြို.နယ် အသင်း ( ရန်ကုန် ) နှင်. ၀ါးခယ်အကျိုးဆောင်အဖွဲ.တို.ထံ လျှောက်ထားလာသော ပညာသင်ဆုများကို ပထမအဆင်.ဥိးစားပေး ၁ / ၂ / ၃ / ၄ .ရွေးချယ်ခြင်း ၊ ဒုတိယ အဆင်. ၀ါးခယ်မမြို.နယ် အသင်း ( ရန်ကုန် ) ပညာရေးဆပ်ကော်မတီ မှ ပမာဏရွေးချယ်ခြင်း နှင်. နောက်ဆုံးအဆင်. အသင်း အမှုဆောင်များအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြု ချက်ရယူဆုံးဖြတ်ခြင်း ပုံစံဖြင်. ရွေးချယ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ယခင်က ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားသူများ အနေဖြင်. ပညာသင်ဆု ရရှိဖူးသူများ ၊ အသင်း နှင်. နီးစပ်ပတ်သက်သူများထံမှသာ သတင်းရယူလျှောက်ထားလေ.ရှိပြီး ယခုလာမည်. ၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်မှ စ၍ ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းကျောင်း ၁၁ ကျောင်း ၊ ကျောင်းခွဲ ၇ကျောင်း တို.သို.ပညာသင်ဆုသတင်းရောက်ရှိနိုင်ရေး ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်းမှ နည်းလမ်းစုံ အသုံးပြု အသိပေးဖြန်.ဝေသွားမည်ဟု သိရသည် ။
၀ါးခယ်မ သခင်သိန်းဖေ ပညာသင်ဆု အတွက်လျှောက်ထားသူများ အနေဖြင်.
( ၁ ) ရိုးသား၍ ကြိုးစားသော ၀ါးခယ်မသား ဖြစ်ရမည် ။
( ၂ ) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအပါအ၀င် လိုအပ်သော စာမေးပွဲများတွင် ထူးချွန်၍ ရမှတ်ကောင်း ရမည် ။
( ၃ ) ငွေကြေး ချို.တဲ့ပြီး ဆွေမျိုး အပါအ၀င် အခြားသူများ၏ထောက်ပံ.မှု မရရှိသူ ဖြစ်ရမည် ။
( ၄ ) မိဘ နှစ်ပါး မစုံလင်သူကို ဦးစားပေးမည်
( အထက်ပါ အချက်အလက်များသည် လတ်တလော သတ်မှတ်ထားချက်များဖြစ်ပြီး အခါအားလျှော်စွာ ပြင်ဆင် /ဖြည်.စွက်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည် ) ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည် ။
ထိုကိစ္စရပ်အသေးစိပ်အတွက်ဆက်သွယ်လိုသူများ / စုံစမ်းလိုသူများ / လှုဒါန်းလိုသူများ အနေဖြင်. ၀ါးခယ်မမြို.နယ် အသင်း ( ရန်ကုန် ) ဖုန်း ၀၁ - ၂၂၆၅၉၀ သို.ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ။
မြို.လေးက နိုင်ငံဂုဏ်ရည် ဘွဲ.ရှင်များ
၀ါးခယ်မ သခင်သိန်းဖေ ပညာသင်ဆုရ မအူပင်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား /သူ များနှင်. Familiar Facing
ဒုတိယမြောက် မိသားစု တွေ.ဆုံပွဲ ၊ ရင်ဖွင်.ပွဲ ၊ အသိတရား မျှဝေခြင်း နှင်. ၀ါးခယ်မသားစိတ်ဓါတ် မြှင်.တင်ခြင်း
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 6:48 PM
Labels: ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း(ရန်ကုန်), သမိုင်းဆိုင်ရာ လေ.လာမိသမျှ (၀ါးခယ်မ )
လောက်ကိုင် သူရဲကောင်း တစ်ဦး - ကွမ်လုံ ကြက်ခြေနီ ...
ကိုယ်ချင်းစာ တရားဆိုတာ .....
ပြည်ပဆရာဝန်ကြီးများ၏ ၀ါးခယ်မ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးကုသမှု
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု၏ သမီး ဒေါ်သန်းသန်းနုနှင့် ...
ယွန်းမီမီကျော် - နိုင်းဝမ်း နှင်. ကမ္ဘာအေး ကားတိုက်...